Ogaden News Agency (ONA) – xaflad balaadhan oo ka dhici doonta london 16 june 2012 (Ogaden Night)
Posted by ONA Admin	/ May 25, 2012
Jaaliyada somalida Ogadeniya ayaa ku howlan qabanqaabadii xaflada Ogaden Night oo ah xaflad ururka dhalinta iyo ardeyda Ogadeniya ee wadanka Ingiriisku ay kusoo bandhigi donaan habeenka Ogadeniya. xafladan oo ay fanaaniinta qaranka somaliyeed iyo Fanaaniinta Somalida Ogadeniyaba ay habeenkaas ka heesi donaan. ayaa waxa sidii lagu yiqiinay ururka dhalinta Ogadeniya ay wacdaro ka dhigi donaan magaalada London habeenimada
Maxamuud Jaango ayaa ah fanaanka boqorka codka iyo ciyaarta dhaantada oo habeenkaas kusoo bandhigi doona heeso iyo dhaantooyin cusub. sidoo kale Fanaanka da’da yar ee codkiisa aad loo jecelayahay Cabdi Khaliq iyo Maxamed Yusuf , Fuad Cade iyo waliba Xaawa Luul ayaa iyana halkaas habeenkaas caweys iyo heessaha hirgalay ee caanka ah halkaas kusoo bandhigi doona.
Madadaalada habeenkan ayaa waxaa ururka dhalinyaradu ay kusoo bandhigi doonaan ciyaaro iyo majaajuloyin gaar ah oo maalmahanba ay socoto diyaarinteeda iyo tijaabadeedu.
Hadaba Barnaamijkan xiisaha leh; Waxaad ka heli kartaan Tigidhkiisa Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee magaalada London iyo xafiiskyada Jaaliyada ee Gobolada Wadanka UK intaba. Horey u dalbo yaan lagaa buuxin…
Goobta: Dominion Centre 112 the green, Southall, Ealing, UB2 4BQ, London UK.
Goorta: 16 June 2012 Saacada 6PM – 2 AM
Xidhiidh: 44 (0) 74034 92129 / 44(0)79 390 51067
Ururka OYSU ee wadanka UK ayaa horey looga bartay ruwaayado caan ah iyo xafladaha noocan oo kale ah inay kusoo bandhigaan si heerkeedu sareyso. waxaana durbaba sawaxan badan ku dhexjiraa magaalada London oo si aad ah looga dareemayo dhaqdhaqaaqa jaaliyada ee ku aadan barnaamijkan xaflada ee lagu maamusayo habeenka Ogadeniya.